Deg Deg Daawo:Maamulka Somaliland Oo Ka Jawaabay Hadalkii Madaxweyne Farmaajo – KHAATUMO NEWS
Deg Deg Daawo:Maamulka Somaliland Oo Ka Jawaabay Hadalkii Madaxweyne Farmaajo
War qoraal ah oo ka soo baxay madaxtooyada maamulka Somaliland ayaa eedeyn loogu jeediyay dowladda Dhexe ee Soomaaliya.
Warka ayaa siddaan u qornaa:
“Shacabka Jamhuuriyadda Somaliland, waxa ladh iyo dacar ku kiciyey hadalka Madaxweynaha Maamulka Muqdisho ee ah, “Wax walba waxa loo hurayaa sidii loo soo celin lahaa Somaliland”. Waxa gef ah in Maamulka Muqdisho iyagoo og dhibtii ay u gaysteen shacabka Jamhuuriyadda Somaliland, in ay waliba ku tiraabaan, waxaanu u dabaal-dagayaa Xornimadii Somaliland ee 26 June 1960-kii. Ma waxay u dabaal-degayaan diyaaradihii iyo madaafiicdii ay la dhaceen shacabka Soamaliland? Marka aadse u dabaal-degaysaan 26 June oo aydaan halgankeedii waxba ku lahayn wax-yeelo mooyee, ma waxaad ujeedaan in aad muujisaan in Somaliland wali tahay qayb ka mid ah Soomaaliya? Waa aragti dhalanteed ah. Waxaannu u aragnaa colaad la sii hurinayo, kala fogaansho iyo dib u soo celinta damaqa xusuusta dhibaatadii gaadhay shacabka Jamhuuriyadda Somaliland.
Xafladdaynta Muqdisho iyo hadallada naxliga leh ee maamulka Muqdisho waxa ay la micno yihiin wixii dhibaato aan kuu gaystay ka garaabi maayo, waliba waxaan duudsiyayaa go’aanka Shacabka Somaliland ku gaadheen in ay dib ula noqdaan xoriyaddii kaga luntay walaalnimo jacaylka iyo midnimadii dayaxeedu dhacay.
Marar badan masuuliyiinta Soomaaliya waxay soo xigtaan Gabaygii Kanna Siib, Kana Saar ee Alla ha u naxariistee Cabdillaahi Suldaan Maxamed (Timacadde). Balse waxa aanay dhaadanayn in Cabdillaahi Suldaan Timacadde ku saxay gabayga yidhaahda.
Dawlad soo gadhay ma ihine,
danteenaa laba diidaye,
Dabuub aannu maqlaynay,
dareen baannu ka qabnaayoo,
Dekeddii Xamar baa leh,
Berbera daadku ha qaado,
dooniyi yaanay ku leexan”.
Previous Post: DegDeg Wararkii Ugu Danbeeyay Kulanka Xaaf iyo Khayre
Next Post: 26 June Goboladii Dhaliyay Ee SSC 59 Sano Kadib ayay Galen Guumaysi Qabiil’